vendredi, 09 avril 2021 20:07
Lemak’i Bas Mangoky : Hiarahana amin’ny orinasa arabo Elite Agro LLC ny fanajariana
Nomen’ny Filankevitry ny Minisitra, notanterahina ny alarobia 7 aprily 2021 alalana ny fananganana «Task Forces» handrindra sy handamina ny fanatanterahana ny tetikasa fanajariana ny lemak’i Bas Mangoky mirefy 60 000ha iarahana amin’ny orinasa Elite Agro LLC. Hatao hampitomboana ny vokatra ara-tsakafo vokarina eto Madagasikara ity tetikasa ity mba hahatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo ao anatin’ny fotoana fohy, araka ny fanazavana. Manana ny fahaiza-manao manokana io orinasa arabo io, ka izy no hampita izany sy hampiroborobo izany eto, ary ny vokatra vokarin’izy ireo dia hamidy amin’ny vidiny mirary eto amin’ny tsena anatiny avokoa ny 70% ary ny 30% kosa dia omen’izy ireo ny fanjakana malagasy maimaimpoana, hoy ny tati-baovao. Ministera sy tompon’andraikitra maro no ifandrimbona ao anatin’izany « Task Forces » izany, ka ahitana ny ministeran’ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, ny ministeran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny ministeran’ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana, ny ministeran’ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro, ny ministeran’ny indostria, ny varotra ary ny asa-tanana, ny orinasa SPM, ireo olom-boafidy any amin’ny faritr’i Menabe, ireo tompon’andraikitry ny faritra any Menabe izay voakasiky ny tetikasa.
vendredi, 09 avril 2021 15:46
Angletera : Nodimandry ny Printsy Philip
Philip, duc d’Edimbourg, nodimandry androany zoma 09 aprily 2021 teo amin'ny faha 99 taonany, vady andefimandrin'ny Mpanjakavavy Elisabeth II, 94 taona.
vendredi, 09 avril 2021 14:20
Ady amin’ny Covid-19 : Hitety tanàna hizara fanafody maimaimpoana
Araka ny tapaka nandritra ny Filankevitry ny Minisitra omaly 07 aprily 2021 dia hisy ireo fiara manokana ahitana miaramila sy mpitsabo hitety ireo faritra ahitana marary betsaka, ka izy ireo no hizara fanafody sy hijery ifotony ireo marary sy ireo mitondra ny tsimokaretina, na ahiana ho mitondra ny tsimokaretina manerana an’ Antananarivo sy ny manodidina. Mitohy hatrany etsy ankilany ny fanentanana ny tsirairay hanaraka ireo lamina napetraka sy ireo fepetra noraisina hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina.
Toy izao manaraka izao ny antontan'isa maneho ny fivoaran’ny Covid-19 ny andron’ny 07 aprily 2021 : -Isan'ny natao fitiliana: 1366-Tranga vaovao: 348 Analamanga 180Atsinanana 26DIANA 14Alaotra Mangoro 8Haute Matsiatra 10Boeny 7Vakinankaratra 26SAVA 9Atsimo Andrefana 10Vatovavy Fitovinany 10Menabe 9Analanjirofo 10Anosy 8Ihorombe 3Betsiboka 4Melaky 13Atsimo Atsinanana 1
Tsy andoavam-bola ny fanaovana fitiliana Covid-19 etsy amin’ny HJRA sy etsy amin’ny CTC-19 Village Voara Andohatapenaka, ary maimaimpoana ny fanomezana taratasy fanamarihana ny fitiliana. Iharan’ny fanasaziana ireo izay mitaky vola amin’ireo olona izay tonga manao fitiliana. Anisan'ireo fanapahan-kevitra noraisin'ny Fitondram-panjakana izany nandritra ny Filankevitry ny minisitra ny Alarobia 07 aprily 2021 ho fitsinjovana ny vahoaka manoloana izao ady iraisana handresena ny valanaretina Covid-19, izay misy eto amintsika izao.
Araka ny tapaka tamin'ny Filankevitry ny Minisitra ny Alarobia 07 aprily 2021 dia hisy ny lamina manokana handrindrana ny fitantanana ireo fanafody fitsaboana ny Covid-19, ka apetraka ny fanaraha-maso izany eny anivon’ny CSB II, CTC-19 ary ny Hopitaly. Tsara marihana fa tsy tokony hividy ny fanafody natokana hitsaboana amin’ny Covid-19 toy ny « azythromicine, magnésium, vitamine C, lovenox, dexamethasone » ireo marary eny anivon’ireo Toeram-pitsaboana ara-panjakana. Iharan’ny fanasaziana goavana ireo izay tompon’andraikitra mivarotra izany. Ny fanafody fitsaboana aretina mitaiza sy ireo aretina hafa kosa dia ny marary ihany no miantoka izany.
mercredi, 07 avril 2021 10:41
Sary sy fampitam-baovao : SCM
CTC-19 Alarobia : Efa nandray marary maneho "forme modérée"
Nisokatra ary efa nandray marary nanomboka omaly 06 aprily 2021 tamin'ny 07 ora sy 28 minitra hariva. Ireo mararin'ny Covid-19 maneho "forme modérée", izany hoe ireo maneho fahasemporana ary ilana hampiasaina "concentrateur d'oxygène" no raisina an-tanana eny an-toerana. Araka ny fandaminana napetraka dia eny amin'ny CSB II no handraisana ireo marary maneho "forme simple", ary eny anivon'ny Hôpitaly lehibe kosa ireo maneho tranga misy fahasarotana na "Forme grave". (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 07 avril 2021 09:38
EMMO-NAT : Hanambara fepetra mikasika ny fihanaky ny Covid-19
Hanambara ireo fepetra mifanandrify aminy mikasika ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ry zareo ao amin’ny fitandroana ny filaminana anio alarobia 7 aprily. Ao amin’ny Salle d’honneur ao amin’ny Toby Ratsimandrava Andrefan'Ambohijanahary, Antananarivo, no hanaovana izany amin’ny 11 ora antoandro. Hifandrimbonan’ny Tafika Malagasy sy ny Zandarimariam-pirenena ary ny Polisim-pirenena ny raharaha.Izy telo tonta ireo mitambatra no mandrafitra ny antsoina hoe EMMO-NAT. Ny lehiben’ny fibaikoana ny Zandarimariam-pirenena dia ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa no mpitarika ny EMMO-NAT, araka ny lalàna manankery. Balita Raharisoa
mercredi, 07 avril 2021 09:37
Barazy Parc Analamanga io maraina io
Maro ireo taraiky tsy tafiditra intsony, na taxi-brousse na fiara manokana. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 06 avril 2021 19:28
Fitateram-bahoaka : Mikatona ny RN5 manomboka ny 08 aprily
Mikatona ny fitateram-bahoaka amin'ny RN5 manomboka ny 08 aprily, fa ireo fiara mpitatitra entana ihany no afaka mivezivezy mampitohy ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo ary olona 3, hatramin'ny mpamily, ihany no azony entina. Tsy anisan’ireo faritra nambaran’ny fanjakana fa mihidy Analanjifo, saingy tafiditra amin’ny ady tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19 io fepetra io, izay manankery mandritry ny 13 andro, araka ny filazana nataon’ny Sekretera jeneralin’ny fileovana ny 5 aprily 2021.